တရား နှင့် ဂါထာတော်များ Archives - Page2of 15 - Latest Myanmar News
March 12, 2020 Latest Myanmar News 0
မသာစ ဆောင်…ကျောင်းစ ရှောင် “မသာစ ဆောင်…ကျောင်းစ ရှောင်”ဟူသော ရှေးဆိုရိုးဆုံးမစကားရှိ၏ ။ ” မသာစ ဆောင် ” ဆိုသည်မှာ နာရေးအသုဘတို့၌ဝေငှသည့် သံဝေဂလင်္ကာများပါသောယပ်တောင်တို့ကိုဆောင်ထားခြင်းဖြင့်ထိုယပ်တောင်ကိုမြင်တိုင်း…..ထိုသံဝေဂလင်္ကာတို့ကိုဖတ်မိတိုင်း….. ” ငါလည်း…တစ်နေ့…သေရအုံးမှာပါလား”ဟုမမြဲခြင်း/ဆင်းရဲခြင်း/အစိုးမရခြင်းသဘောတို့ကို ဆင်ခြင်၍သံဝေဂဥာဏ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တည်း ။ ” ကျောင်းစ ရှောင် ” ဆိုသည်မှာလူတို့သည်သံဃာတော်များထံမှသွားတိုက်ဆေး/တံ ဆပ်ပြာခဲ/မှုန့် […]
ပြင်ဆင်လို့လှတဲ့အလှထက် ပိုလှတဲ့ အလှစစ်ကိုလိုချင်လျှင် ငါးပါးသီလ မြဲပါ
တကယ် လှချင်ရင် ငါးပါးသီလ မြဲသူတွေ အတွက် ထူးခြားချက် ( ၃ ) ခု ရှိပါတယ် … ဘာတွေလဲ …? သူများတွေထက် ပိုပြီးတော့ ရုပ်လှတယ် ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာ ကြွယ်ဝတယ် ၊ ဉာဏ်ပညာ ကြီးမားတယ် ဒကာကြီးတွေ စဉ်းစားကြည့်စမ်း […]
March 11, 2020 Latest Myanmar News 0
နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်များသည်သာ လှူ ဒါန်းနိုင်ရလိုသူ ဖြစ်ရလိုပါ၏ … နေ့တိုင်းဆင်ခြင် စိတ်ကိုပြင် လောကလူတွေမှာ ရုပ်ကို ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်ပြင် စိတ်မပြင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ရဖို့ မရှိဘူး ။ မြတ်စွာဘုရားက – ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ, ပထဝီ , အာပေါ , […]
အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ၁။ ကျန်းမာမှုကို ရွေးချယ်ရမယ်၊ ၂။ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထဲက ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှုကို ရွေးချယ်ရမယ်၊ ၃။ ဆွေတွေမျိုးတွေထဲက ခင်မင်တဲ့ဆွေမျိုးကို ရွေးချယ်ရမယ်၊ ခင်မင်သူကို ရွေးချယ်ရမယ်၊ ရင်းနှီးသူကို ရွေးချယ်ရမယ်။ ၄။ ချမ်းသာသုခတွေထဲက အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်ရမှာကတော့ နိဗ္ဗာန်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ၁။ ကျန်းမာမှုကိုိ ရွေးချယ်ရမယ်။ […]
အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးအောင် ပြင်ဆင်ကြိုးစားထားသင့်သည့် ကြောက်စရာကောင်းသောအစွဲ ဖြစ်ရပ်မှန်
March 10, 2020 Latest Myanmar News 0
ကြောက်စရာကောင်းသောအစွဲ လွန်ခဲ့နှစ်လောက်က ဦးဇင်းနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ ဒကာမတစ်ယောက် အသဲကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီဒကာမဟာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာကို အရမ်းကို ရိုသေလေးစားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ၊ ရပ်ထဲရွာထဲမှာလဲ သူမပါမပြီးတဲ့ ချက်ပြုတ်ရေး သမား ကောင်းတစ်ယောက်ပါ၊ ပိဏ္ဍပတ်ဆွမ်းလဲ နေ့တိုင်းအပြတ် အမြဲလောင်း တယ်၊တရားစခန်းတိုင်းမှာလဲ သူမပါရင် မပြီးဆိုသလို ဝေယျာဝစ္စတွေကို ဦးဆောင်ပြီး […]
ဘာလှူလှူ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုပြီး လှူဒါန်းကြနော်
March 9, 2020 Latest Myanmar News 0
အကျိုးပေးလို့ မကုန်နိုင်ဘူး သေသေချာချာ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုပြီး လှူဒါန်းကြနော်။ မလှူခင် ” ကာလပေါက်ဈေး ” လှူပြီးရင် ” ဓမ္မပေါက်ဈေး ” ကာလပေါက်ဈေးက ထောင်ဂဏန်း၊ သောင်းဂဏန်း၊ သိန်းဂဏန်း၊ သန်းဂဏန်းလောက်ပဲ တန်ဖိုးရှိတာ။ ဆိုင်က တန်ဖိုးဖြတ်တာ။ ဓမ္မပေါက်ဈေးက သိန်းပေါင်း၊ သန်းပေါင်းမြောက်များစွာ […]
March 8, 2020 Latest Myanmar News 0
ရေလှူရခြင်းအကျိုး ဗန္ဓုမတီဆိုတဲ့ မြို့မှာပေါ့….. သောက်ရေ ချိုးရေများ ၀ယ်ကြအုန်းမလားရှင် …. အမလေး …. အရှင်နေမင်းကလည်းဆိုတာလေ ငါ့တစ်ယောက်ထဲကိုများ ကွက်ပြီးပူနေသလား အောက်မေ့ရတယ် ပူလိုက်တာ ရေ၀ယ်မယ့်သူက မရှိ ဗိုက်ကဆာ ညည်းလေးရဲ့ ကံကလည်းဆိုးလိုက်တာ မိရေသည် ။ အိုး … တရားစာရွတ်သံတွေပါလား …. […]
အသက်အလိုလိုကြီးလာသလို တရားအလိုလိုလိုက်ကြီးလာမှာမဟုတ်လို့ သတိရှိပါ
ကုသိုလ်ဒါနပြု ပါ၏ အိုိပယ် နဲ့ အိုကြွယ် လူ့ဘဝမှာ အသက်၊ သိက္ခာလို့ကြီးစရာ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အသက်ကြီးအောင် တမင်ကြိုးစားဖို့ မလိုဘူး။ စိတ်ပါပါ မပါပါ အားအား မအားအား ဇရာကြိုးက တာဝန်ကျေအောင် ဆွဲသွားတာ ဆိုတော့ မကြီးချင်လည်း ကြီးရမှာပါ။ ရှေ့က အရွယ်ကြီးလာတိုင်း နောက်က […]
တပေါင်းလပြည့်နေ့ အတွက် ထူးခြားကျင့်စဉ်
March 7, 2020 Latest Myanmar News 0
တပေါင်းလပြည့်် ကျင့်စဉ်ထူး ဒီကျင့်စဉ်လေးကတော့ စကျင့်ရမဲ့ရက်ကတပေါင်းလပြည့်နေ့မှသာဓိဋ္ဌာန်စဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိူးကျေးဇူးကတော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိပါဘူး ။ ဒီကျင့်စဉ်ကိုစတော့မယ်ဆိုရင် တပေါင်းလပြည့် နေ့ညနေ(၆:၀၀)နာရီ တိတိအချိန်မှာစရမှာဖြစ်တယ်။နီးစပ်ရာဘုရား တစ်ဆူဆူမှာပြုလုပ်ရပါမယ် စတင်တဲ့ရက်သာဘုရားမှာပြုလုပ်စတင်ရမယ် ဖြစ်ပြီးကျန်သောရက်များသည် မိမိအိမ်တွင်သာပြု့လုပ်ရန်ပါ။ အဓိဋ္ဌာန်မစခင်မှာ….ငွေပန်း..ရွေပန်းအပွင့်(၃၀)သောက်တော်ရေ(၁)ခွက်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ညနေ(၆:၀၀)နာရီတိတိအချိန်မှာ ရွှေပန်း ငွေပန်းများနဲ့ သောက်တော်ရေကိုဘုရားမှာကပ်လှုပူဇော်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်(၅)ပါးသီလခံ ရုပ်နာမ်(၂)ပါးခန္ဓာ(၅)ပါး ကိုဘုရားလှု ပြီးမှဓိဋ္ဌာန်စဝင်ရပါမယ်။ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်တဲ့နေရာမှာ… […]
ဆွမ်းလေး တစ်ဇွန်း လောင်းလှူခဲ့ခြင်းကြောင့် ရရှိခဲ့သည့် ကြီးမားသော အကျိုးထူး
ဆွမ်းတစ်ဇွန်းရဲ့ အလှူအကျိုး᠌᠌᠌ မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တော်အခါက ကဋစ္ဆုဘိက္ခာထေရီ ရဟန္တာမကြီးဆိုတာရှိတယ် သူဟာ ( ၉၂ )ကမ္ဘာထက်၌်အမျိုးကောင်းသမီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ တိဿမြတ်စွာဘုရား ဆွမ်းခံကြွလာတော်မူတော့ ဆွမ်းကလေးတစ်ဇွန်းကို လောင်းလှူခဲ့တယ် အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့် သေတဲ့အခါ တာဝတိံသာမှာ နတ်မင်းကြီးတို့ရဲ့ မိဖုရားအဖြစ်နဲ့ ( ၃၆ ) […]